यो हो प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको पहिलो दिन खल्लो हुनु र छायाँमा पर्नुको एकमात्र कारण ! | Prahar News
यो हो प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको पहिलो दिन खल्लो हुनु र छायाँमा पर्नुको एकमात्र कारण !
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको यसपटकको भारत भ्रमण छाँयामा परेको छ अर्थात यो भ्रमणलाई खासै महत्व दिएको देखिदैन् । रुसका विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोभ दुई दिने भ्रमणका शिलशिलामा भारतमा थिए । हिजो देखि जारी उनको भ्रमणमा आज उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुसंग भेट गरिरहेका छन् ।
शुक्रबार नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि भारत भ्रमणमा नयाँ दिल्ली पुगेका छन् । तर भारतमा देउवाको भ्रमण रुसका विदेशमन्त्रीको आगमनको छायाँमा परेको छ । रुसका विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोभले हैदरावाद हाउसमा शुक्रबार भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरसंग भेटवार्ता गरेका छन् । उनले शुक्रबार नै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग पनि भेटवार्ता गरेका छन् । चीन भ्रमण सकेर रुसका विदेशमन्त्री सर्गेइ भारत पुगेका थिए ।
भारतीय कुटनैतिक संयन्त्र रुसी विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा केन्द्रीत भइरहेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले पनि रुसी विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर समाचारहरु सम्प्रेषण गरिरहेका छन् ।
भारतका सर्वाधिक हेरिने आजतक, स्टार न्युज, रिपब्लीक भारत लगायतका टेलिभिजनहरुमा रुसी विदेशमन्त्रीका समाचारहरुले स्पेस पाएका छन् । युक्रेन र रुसको जारी युद्धका कारण पनि रुसी विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणले बढि प्राथमिकता पाएको हो । भारत भ्रमण अगाडि रुसी विदेश मन्त्री लाभरोभ उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणमा थिए ।
यता नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि तीन दिने भ्रमणका शिलशिलामा भारत पुगेका छन् । उनलाई विमानस्थलमा भारतीय रक्षा राज्यमन्त्रीले स्वागत गरेका थिए । उनको शुक्रबार उच्चस्तरीय भेटघाट भएन् ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले समाचारको प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । शुक्रबार राती रुसी विदेशमन्त्री स्वदेश फर्किसकेका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाको उच्चस्तरीय भेटभाट शनिबार भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाभारत भ्रमण